Mayelana NATHI - Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Siyakwamukela ukuvakashela i-Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Siyinkampani yokuhweba enhle kakhulu
I-Yiwu Sandro Trade Co., Ltd .. Etholakala e-Yiwu, Zhejiang, China, ekhethekile ekuhlinzekeni izimpahla ezahlukahlukene ezilwa namagciwane:
1 / ukulahla izifihla-buso zokuvikela nezokwelapha 2 / KN95 Masks Egoqekayo (enezinhlobo ze-FFP1 / FFP2 / FFP3)
I-3 / imaski yokuhlinzwa, imaski yezingane 4 / 3M KN90 / KN95 buso
Izinga 1 / izinga 2 / izinga 3 / izinga 4, kokubili ukusetshenziswa komphakathi kanye nokwelashwa.
I-1 / i-thermometer yendlebe I-2 / i-thermometer yebunzi 3 / cap nesigqoko ngesihlangu
1 / imaski yendwangu 2 / ama-bandana.
Inkampani yethu inezimboni ezingaphezu kuka-100 zokubambisana ezibhaliswe ngaphansi kwemithetho yeRiphabhulikhi yabantu baseChina, zithole isitifiketi sokubhaliswa sedivayisi yezokwelapha nelayisense yokukhiqiza, eqinisekiswe nge-ISO9001: 2008 International Quality Management System. Zonke ziphothule iziqu zezimpahla:
1 / Europe EN149: 2001 + A1: 2009 ene-FFP1 NR / FFP2 NR / FFP3 NR amamaki 2 / American NlOSH N95, FDA,
3 / Australia AS / NZS1716: 2003 4 / Chinese GB / YY.
Umbiko wokuhlola we-5 / CE & FDA AD GB wokuthekelisa kuwo wonke umhlaba.
Amandla we-R & D yokuqala ezimele
Ukuhlinzekwa okuphephile nokwanele kwezinto zokusetshenziswa
Iqembu lokuthengisa elinobuhlakani elinolwazi lochwepheshe nesimo sengqondo esiqotho
Ukusekelwa okuhle kakhulu kwangemva kwensizakalo okususelwa kumgomo wokuqala weKhasimende
Uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi olunamazinga aphezulu wokuhlola
Ukuhlinzekwa okuphephile nokwanele kokuluhlaza izinto zokwakha
Njengoba izinselelo zomhlaba zishesha, sihlanganisa abantu abanesibindi sokubhekana nenselelo. futhi sandise ngokuqhubekayo amandla ethu okuhlinzeka. Manje sesingafinyelela kwisigidi esingu-1 + sokulahla imaski kanye nezinkulungwane eziyi-100 + zamaski e-KN95 ngosuku.
Njengoba kunenqwaba yamamaski ethunyelwa nsuku zonke, sithuthukisa insizakalo yamalungiselelo, manje sesibambisene nezinkampani eziningi ezinkulu zokuhanjiswa kwempahla. Kukhona izindiza ezijwayelekile ezi-2-3 njalo ngesonto futhi ezindiza ezikhumulweni zezindiza emazweni ahlukahlukene, ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ifika kuwe ngokuphepha nangokushesha.
Amaqembu ochwepheshe nomkhiqizi, ikhwalithi ephezulu kanye nokuthekelisa ngobuchwepheshe, konke kuyasiqinisekisa ukuthi sikunikeza insizakalo enhle kakhulu kuwe.
1 / Imishini esebenza ngokunemba kakhulu nangokunemba okuzenzakalelayo.
Okuhlangenwe nakho okungu-2 / okunothile nedokhumenti ephelele yokuthunyelwa
3 / iziqu eziqediwe zokuthekelisa izinto eziwumqedazwe zokuthekelisa
Kuvunyelwe emhlabeni jikelele
Ukuhlangabezana nezidingo zikahulumeni. Zonke izimpahla zama-anti virus zinemvume evela emazweni omhlaba wonke, kufaka phakathi i-US, i-Europe, i-China, i-Australia, i-New Zealand, njll.
1 / Ikhwalithi ephezulu
2 / amanani ancintisanayo
Ukulethwa oku-3 / okusheshayo
4 / Egculisayo After-sales service
I-One-stop Service neThimba eliqeqeshiwe
1 / Abasebenzi abangochwepheshe. Enkambisweni yokulandelwa kwenqubo yokukhiqizwa, ukuhlolwa komkhiqizo nokuhlolwa, ukuphathwa kwempahla, kanye nensizakalo yamakhasimende, singabasebenzi abasebenza ngokubambisana nabakhulu
2 / 24/7, sibeka izidingo nezidingo zamakhasimende endaweni yokuqala
Isevisi Yamakhasimende Engenakuqhathaniswa
1 / Ukunikela ngezinga eliphezulu kakhulu lenkonzo nokusekelwa kumakhasimende ethu abalulekile emhlabeni wonke.
2 / Ukunikeza izimpendulo ezisheshayo nezobungcweti emibuzweni yakho noma kumazwana akho.
3 / Ukuphendula kungakapheli isikhathi esisheshayo sokwenza izinto. Yonke imibuzo yezobuchwepheshe izophendulwa kungakapheli amahora angama-24.
Ukuxhumana nathi, sicela usithumele i-imeyili ku: umphathi@sandrotrade.com
Yiwu sandro trade Co., ltd. Ukumaketha
Imaski Yobuso Bezokwelapha, I-Kn95 Face Mask, Indwangu Yemaski, Isifihla-buso, Ukotini Mask, Imaski Yokuhlinzwa,